अब नेपाली फुटबल कता?
सराेज तामाङ मंगलबार, मंसिर ९, २०७७, १२:०७
काठमाडौं- खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा निराश देखिएका फुटबलर आठ महिनापछि मैदान फर्किए। तर मैदान फर्किएको खुसी खेल नतिजाका कारण टिकिरहन सकेन। बंगलादेशसँगको दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले एक खेल हार्यो, दोस्रो खेल बराबरीमा सकियो। त्यसले नेपाली फुटबलले के सिक्न पायो त?
खेल्न नपाएर यत्तिकै बस्दाको समस्याले धेरै खेलाडीको विरोधपछि नेपालले बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भयो। एकातिर कोरोनाको डर अर्कोतर्फ लामो समयपछि मैदानमा फर्किन पाउने उत्साह। बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नुभन्दा अघि फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठले चिन्ता ब्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘पहिलेको जस्तो स्टामिना छैन। पुरानै लयमा फर्किन समय लाग्छ।’
२०१८ को साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले बंगलादेशलाई ढाकास्थित बंगबन्धु राष्ट्रिय रंगशालामै २-० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो। नवयुगले भने जस्तै बंगलादेशविरुद्धको खेलमा खेलाडीमा पहिलेको जस्तो स्टामिना देखिएन। दोस्रो खेलमा गोलरहित बराबरीको भन्दा पहिलो खेलमा २-० गोलको हार बिर्सनलायक रह्यो।
नवयुग भन्छन्, ‘हामीलाई मानसिक रुपमा दबाब भयो। हामीले पटक पटक कोरोना परिक्षण गर्नु परिरहेको थियो। बंगलादेश पुगेपछि पनि एक जना खेलाडीमा कोरोना पोजेटिभ भयो, त्यसपछि झनै डर फैलियो। यसले पनि केही असर गर्यो।’
हुन त काठमाडौंमा करिब एक साता अभ्यास गर्दा सिनियर खेलाडीलाई कोरोना लागेपछि आठ नयाँ अनुहारसहित नेपाली टिम ढाका पुगेको थियो। कोरोनाले थिलोथिलो परेको नेपाली फुटबल टिममा ६ नयाँ अनुहारले मौका पाए।
बंगलादेशविरुद्ध पहिलो खेलमा विकास खवास, एरिक विष्ट र दर्शन गुरुङले डेब्यु गरेका थिए भने दोस्रो खेलमा छिरिङ गुरुङ, सेसेहाङ आङ्देम्बे र पुजन उपरकोटीले डेब्यु गरे। अनुभवि पुराना खेलाडी र नयाँ अनुहारको समिश्रणमा नेपालले सोचे जस्तो नतिजा निकाल्न नसके पनि केही नयाँ खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन पनि नयाँ खेलाडीको प्रदर्शनमा सन्तुष्ट नै छन्। तर समग्रमा नतिजाको हिसाबले उनी सन्तुष्ट छैनन्। भन्छन्, ‘तयारी छोटो थियो। नतिजाबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था त छैन। कि जित कि बराबरी भनेर गएको एक खेलमा हार्न पुग्यौं।’
अभ्यास गर्नुअघि आफूले दिएको अभिब्यक्ति सहि सावित भएको नवयुगको ठहर छ। ‘खेलिरहँदा खेलाडीमा हुने स्तर र नखेली बस्दा खेलाडीमा पर्ने भद्दापन अलग्गै छुटिने’, नवयुगले भने, ‘हामीले थोरै समयमा अभ्यास त गर्यौं। धेरै गाह्रो नभए पनि समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। पहिलेको जस्तो खेल्न नसकिएको चाहिँ हो।’
जति हारमा पाठ सिकिन्छ। त्यो जितमा पाइँदैन। करिब दुई वर्षअघि पराजित गरेको बंगलादेशसँग अहिले हार्दा नेपाली टिमले राम्रै पाठ सिकेको हुनुपर्छ। कोरोनाको महामारी बंगलादेशले नभोगेको होइन। समस्याहरु बंगलादेश टिमसँग नभएको होइन तर नतिजा बंगलादेशको पोल्टामा गयो। त्यसमा टिमले कत्तिको समीक्षा गरेको छ? एन्फाले के योजना बनाउँदै छ? त्यो देखिने नै छ।
करिब एक वर्षपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल खेलेको थियो। यो निकै लामो अवधि हो। त्यसकारण पनि खेलाडीमा प्रदर्शन खस्किनु स्वभाविक हो। तर अबको यात्रा नेपाली टिमको कस्तो हुन्छ? यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ।
राष्ट्रिय टिमको आगामी योजना र तयारी बारे एन्फाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। तर केही दिनमै कार्यसमितिको बैठक बसेर सुरक्षाका उपायाहरु अपनाउँदै तयारी थाल्ने अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा बताउँछन्। उनले भने, ‘केही दिनमै कार्यसमितिको बैठक हुन्छ। टेक्निकल कमिटी र टेक्निकल विभागले योजनाहरु बनाइरहेको छ। कार्यसमितिको बैठकपछि मात्रै थाहा हुन्छ।’
अहिले नेपाली टिम एन्फा एकेडेमीमा क्वारेन्टाइनमा छ। एन्फाको क्वारेन्टाइन अवधि सकिएपछि फेरि कोरोना परिक्षण गरेर खेलाडीलाई अभ्यासमा राख्ने योजना छ। नेपाली फुटबल टिमको तत्काल कुनै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता छैन। विश्वकप छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरण र एएफसी कप छनोटको संयुक्त खेलबाहेक त्यो भन्दा अगाडि तत्कालको लागि नेपालले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता छैन।
यही विश्वकप छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरण र एएफसी कप छनोटका तीन घरेलु मैदानमा हुने खेललाई मध्यनजर गर्दै तयारी गरिनु पर्ने प्रशिक्षक महर्जनको निचोड छ। यो प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले अब २०२१ को मार्च महिनामा चाइनिज ताइपेई र अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ भने जुन महिनामा जोर्डनसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ।
यही प्रतियोगिताको लागि तयारीस्वरुप बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। एन्फा अध्यक्ष शेर्पा बंगलादेशविरुद्धको खेलबाट धेरै कुरा सिकेको बताउँछन्। ‘बंगलादेशसँगको खेलले फुटबलको माहोललाई पुनः फर्काउने काम गरेको छ। हेल्थ प्रोटोकल र अहिलेको नयाँ वातावरणमा के कस्ता चुनौती हुन्छ भन्ने कुराहरु थाहा पाएका छौँ’, उनी थप्छन्, ‘हामीले बंगलादेशसँग खेल्ना साथ सरकारले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ। अर्को कुरा थोरै समयमा पनि हाम्रा खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। त्यो सह्रानीय छ।’
अहिले खेलाडीको मुख्य समस्या भनेकै फिटनेसमा हो। नेपाली टिमका अनुभवि मिडफिल्डर रोहित चन्द पनि यसकै शिकार बने। केही दिनेको अभ्यासपछि उनी चोटग्रस्त हुँदा बंगलादेश प्रस्थान गर्न सकेनन्। उनको अभावमा पनि नेपाली टिमको मिडफिल्ड राम्रो हुन सकेन। बंगलादेशविरुद्धको दुई खेलमा अधिकांश खेलाडीहरुमा पनि फिटनेसकै समस्या देखिन्थ्यो। यो कुरामा प्रशिक्षक महर्जन पनि सहमत छन्।
अबका दिनमा राष्ट्रिय टिमलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन एन्फालाई निकै ठूलो चुनौती छ। खेलाडीहरुले पुरानै लय समात्न सकिरहेका छैनन्। खेलाडीले सुधार गर्नु पर्ने पक्ष धेरै छन्। त्यसका लागि उपयुक्त योजना र तयारीको खाँचो छ। गएको वर्ष मंसिर अन्तिमबाट सुरु भएको लिग फुटबल अहिले त्यही समयमा हुने देखिँदैन। त्यसले पनि समस्या थप्ने नै छ।